सेक्स टोयमार्फत् महिला बलात्कार, १९ वर्षीया युवती पक्राउ ! – Everest Dainik – News from Nepal
सेक्स टोयमार्फत् महिला बलात्कार, १९ वर्षीया युवती पक्राउ !
एजेन्सी । सेक्स टोयमार्फत् २५ वर्षीयाा भारतीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवती पक्राउ परेकी छन् । नर्थ ईस्टमा बस्ने २५ वर्षीया महिलाले आफूलाई १९ वर्षीया युवतीले पटक–पटक सेक्स टोयमार्फत बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
घटना गत वर्ष सेप्टेम्बरको हो । यो घटनामा सीमापुरी पुलिसले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, पुलिसले अर्की आरोपी १९ वर्षकी युवतीमाथि भने मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकता (धारा ३७७) लाई अपराधको श्रेणीबाट बाहिर निकालेको भन्दै उनी आफू पक्राउ पर्न नहुने बताएकी थिइन् ।
जानकारीका अनुसार पीडित महिला एक व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि मानिससँग भेटघाट गरिरहन्थिन् । यसै क्रममा उनको भेट रोहित र राहुलसँग भयो । भेट भएकै दिन दुवैले पीडित महिलालाई दिलशाद कोलोनीको एक अपार्टमेन्टमा पुर्‍याएर सामूहिक बलात्कार गरे । त्यसपछि भिडियो बनाएर पीडितलाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले । आरोपका अनुसार १९ वर्षकी युवतीले सेक्स टोयमार्फत् पीडितलाई बलात्कार गर्थिन् । अब ती युवतीलाई बलात्कारको आरोपमा समलैङ्गिकताको आधारमा पक्राउ गरिएको छ ।
ती महिलाले पीडित महिलालाई टोयमार्फत् बलात्कार गर्नुका साथै कुटिपटि पनि गर्ने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् । शाहदरा जिल्लाका पुलिस अधिकारीले यसबारे पुष्टि गरेका छन् ।
ट्याग्स: lady arrested, Rape